Kungani inja yami ingadli noma ingaphuzi amanzi? | Izinja Umhlaba
Kungani inja yami ingadli noma ingaphuzi amanzi?
I-Encarni Arcoya | | Izifo
Yize sinezinja isikhathi eside, kunezikhathi lapho singazi izimbangela zazo kungani izilwane zethu ziyeke ukudla nokuphuza.
Kunezizathu eziningi zokuthi kungani lokhu kungenzeka enjeni. Ngaso sonke isikhathi kubalulekile ukwazi ukuthi kungani inja yethu ilahlekelwa isifiso sokudla futhi ingaphuzi amanzi, ukuze yenze ukwelashwa okufanele kulezi zinhlobo zezinkinga.
1 Izizathu zokuthi kungani inja ingafuni ukudla
1.2 Ngokugonywa muva nje
1.3 Imvelo engaziwa nokuhamba
2 Izizathu zokuthi kungani inja yami ingaphuzi amanzi
2.3 Izinkinga zamazinyo
3 Ungayiphuzisa kanjani inja engafuni ukuphuza amanzi?
4 Inja yami ayidli futhi ayiphuzi
5 Inja yami ayidli futhi ilala kakhulu
6 Inja yami ayidli futhi ayiphuzi futhi idabukile
7 Inja yami sekuphele izinsuku ezimbili ingadli noma iphuza, ngenzenjani?
8 Inja yami ayifuni ukudla, iphuza amanzi kuphela
8.1 Yini engenzeka enja uma ingafuni ukudla noma ukuphuza amanzi?
9 Inja yami ayikwazi ukuphuza amanzi
10 Yini okufanele uyenze uma inja yami ingadli?
10.1 Mnike okuthile akuthandayo
10.2 Chitha isikhathi naye
10.3 Shintsha indlela odla ngayo
10.4 Nikeza iyogathi
Izizathu zokuthi kungani inja ingafuni ukudla
Ngendlela efanayo naleyo eyenzeka ngayo kubantu, kunezizathu eziningi zokuthi kungani izinja kwesinye isikhathi zenqaba ukudla. Abanye babo bangaba abalandelayo:
Lapho isifiso sokudla sincipha, imvamisa kuyisibonakaliso esingangabazeki sokuthi kukhona ubukhona besifo esithile, ikakhulukazi uma inja yethu ikhombisa olunye uchungechunge lwezimpawu ezihambisana nayo.
Yize kunesifiso sokudla, lokhu akusho ngaso sonke isikhathi ukuthi kuyisifo esibi, yingakho kudingekile ukuvakashela udokotela wezilwane, ngoba uma kungenjalo, inja yethu inengozi enkulu yokuhlaselwa yizifo ezinzima njengomdlavuza.
Ngokugonywa muva nje
Ngaphandle kokuthi le mithi yokugoma ibhekele ukusindisa izimpilo zezilwane eziningi ezifuywayo, ezikhathini eziningi zingadala imiphumela emibi ethile. Eziningi zazo zingaba mnene futhi zibe zimfushane kakhulu, futhi phakathi kwazo singathola ukulahleka kwesifiso okwesikhashana.
Imvelo engaziwa nokuhamba
Uma sibona ukuthi inja yethu inesifiso esivamile, kepha iyancipha lapho sithatha uhambo nayo noma uma kwenzeka lapho sesithuthele kwenye indlu, kungenzeka, inja yethu ayifuni ukudla ngoba ayiyazi imvelo, kukhiqiza lokhu ukukhathazeka.
Kukhona izinja ezingaba nzima kakhulu, nezimo ezithile lapho zingazizwa zikhululekile khona, kungaba ngenxa yokuba khona kwenja enolaka eseduze, noma ngoba i-feeder ikwenye indawo engayithandi, shiya ukuze udle uphuze.
Izizathu zokuthi kungani inja yami ingaphuzi amanzi
Kunezizathu eziningi zokuthi kungani inja ingala amanzi. Nazi ezinye zazo:
Lesi ngesinye sezitha ezinkulu zenja, ngoba ngenxa yalokhu, ungaba nezinkinga zempilo, okuthi uma zingelashwa, zivele ziphenduke isifo esibi.
Kunezifo ezidalwa amagciwane. Ezinye zalezi zifo angaba amarabi, i-letopspirosis noma i-distemper. Kumele siye ngokushesha kudokotela wezilwane, ngokushesha lapho sithola ukusola okuncane.
Lesi ngesinye sezinkinga ezivame ukwenzeka kubangela ukuntuleka kokoma nokuphelelwa isifiso sokudla. Ubuhlungu nokuthi kungakhathaza kanjani ukwenza noma yisiphi isenzo esidinga ukusetshenziswa kwamazinyo noma ukuhambisa umlomo, kunganele inja yethu iyeke ukudla nokuphuza.
Ungayiphuzisa kanjani inja engafuni ukuphuza amanzi?
Uma inja yenqaba ukuphuza amanzi futhi idinga ukuniselwa, inketho enhle kungaba ukukunikeza inyama noma umhluzi wenkukhu, ngoba ukunambitheka nephunga lalokhu kudla ngeke kuvule kuphela isifiso sakho sokudla futhi kukukhuthaze ukuthi udle, kepha ngasikhathi sinye kuzokwenza womile kunalapho udla ukudla okujwayelekile futhi ngasikhathi sinye, kuzokuvumela ukuthi ungene inani elithile lamanzi.
Kulokhu, udinga ukugwema ukufaka usawoti kanye nanoma yiluphi uhlobo lwesinongo. Ngendlela efanayo, kungenzeka ukuhlinzeka amanye ama-ice cubes, ngoba izinja zivame ukuthanda ukudla ama-ice cubes kakhulu futhi kulezo zimo lapho zigula khona futhi / noma zinenkinga yokusebenzisa amanzi, le nketho ingafaneleka ukufeza lelo hydrate.
Inja yami ayidli futhi ayiphuzi
Izizathu zokuthi kungani inja yethu ingafuni ukuphuza noma ukudla zihlukahlukene kakhulu. Into esemqoka kunayo yonke futhi esake sabhekana nayo ngaphambilini, ingcindezi, yize ushintsho enqubweni yekhaya lethu lungaba yisizathu sokushoda kwesifiso sokudla. Ngokunjalo, ukudabuka, njengokwesaba, kwenza inja ikwazi ukubhekana nokunganaki kangako ize izizwe ingenandaba nokudla.
Ngalokho, kungenzeka ukuthi uma sondla into efanayo nsuku zonke, inja yethu izozizwa inesithukuthezi ngayo. Ngokunjalo, enye ingozi enkulu, kepha kulokhu ngenxa yokuntuleka kokoma, ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni, ngoba umzimba wenja ungabola ngesikhathi esifushane lapho inani lamanzi adingekayo linganele.
Inja yami ayidli futhi ilala kakhulu
Yize kuvame kakhulu ukuthi kuthiwe amakati alala cishe ama-50% ezimpilweni zawo, iqiniso ukuthi kungenzeka futhi ukusho okufanayo ngezinja. Ngesikhathi semidlwane yazo, izinja zingachitha amahora angama-17 ngosuku zilele, ngenkathi sezikhulile zingalala cishe amahora ayi-14 ngosuku.
Nokho, inkinga yangempela akukhona ukuthi inja ijwayele ukulala kakhulu, kodwa ekutheni lapho iphapheme ayisebenzi, ubonakala edangele, edabukile futhi kubonakala sengathi akanasifiso sokwenza noma yini, noma aphuze amanzi noma adle.
Ezimweni lapho inja ivuka khona futhi isheshe ilale futhi, futhi imvamisa ilala amahora amaningi kunalawo akhonjiswe ngaphambili, kungenzeka ukuthi ihlushwa yi-hyperthyroidism.
Ngendlela efanayo, lapho inja ingafuni ukudla, noma ikunikeza ukudla okunothile kunokujwayelekile, futhi kubonakala kudabukisa impela, noma kungenasizathu, Kungenzeka ukuthi wethule ezinye izifo ezihlobene nohlelo lokugaya ukudla, kuya ezinso noma okuthile okungathi sína ngokwengeziwe.
Kulezi zimo, Kuyadingeka ukuhlola ukuthi isilwane sinemfiva kanye / noma ukuthi isisindo saso sehle kakhulu yini. Kodwa-ke, kufanele futhi kuthiwe lezi zimpawu azihlali zikhomba isifo esibi, ngakho-ke asikho isizathu sokuqala ukukhathazeka ngaphambi kwesikhathi, yize kuzohlala kungcono ukuphepha kunokuzisola.
Ngokunjalo, kufanele kuqashelwe ukuthi noma ngabe kunjalo, kuyohlale kuneseluleko sokuya kudokotela wezilwane othenjiwe ozophatha ukwenza izivivinyo ezifanele ukuthola ukuxilongwa okunembile nokuthola ukwelashwa okufanele kakhulu.
Inja yami ayidli futhi ayiphuzi futhi idabukile
Phakathi kwezizathu ezivame kakhulu zokuthi kungani inja ingafuni ukudla noma ukuphuza, iveze iqiniso lokuthi kungahle kube lusizi. Izizathu zalolu sizi zingahluka kakhulu, kepha okuvame kakhulu ukuthi inja izwa ukuthi ayisatholi ukunakwa okufana nokwangaphambili.
Lapho sihlangabezana nezinguquko ezimpilweni zethu ezingashintsha nganoma iyiphi indlela indlela nokuthi sidlala kangaki nesilwane sethu, lapho nathi sizizwa sidabukile noma uma singasasichithi isikhathi esiningi sinaye, kungenzeka ukuthi isimo senja siyehla futhi anqume ukungadli noma ukuphuza amanzi.
Isixazululo sokwenza inja idle futhi iphuze amanzi imvamisa ukuhlala eceleni kwayo lapho iphaka ukudla, imnikeze okuphakelayo okumanzi okusezingeni eliphakeme futhi ube nenja ngenkathi ihlafuna.
Ukunikeza ukudla okuseqophelweni eliphezulu okunezakhamzimba ezinhle kuzomsiza ukuthi abuyise isifiso sakhe sokudla., ikakhulukazi lapho inikezwa ifudumele, ngoba iphunga layo lizokukhuthaza ukuthi uzame. Endabeni yamanzi, singafaka amanzi amancane emgodini bese sinikela nge-hydration eyengeziwe.
Inja yami sekuphele izinsuku ezimbili ingadli noma iphuza, ngenzenjani?
Ezimweni ezimbi kakhulu, izinja ziyakwazi ukusinda kuze kube amasonto ambalwa ngaphandle kokudla ukudla, yize zingenakwenza lokho ngaphandle kwamanzi; Empeleni, uma bengadli amanzi, bangahlala izinsuku ezimbalwa kuphela. Kodwa-ke, kunezimo ezingeqile lapho inja yethu ingahamba izinsuku ingadlanga ngenxa yezizathu ezahlukahlukene.
Ngaphakathi endlini, lapho sibona ukuthi inja yethu ayidli ukudla kwayo, kubalulekile ukuvakashela udokotela wezilwaneUma iwumdlwane noma inenja endala kakhulu, egulayo noma uma iveza izimpawu ezifana nokuhlanza, isifo sohudo noma imfiva, kuzobaluleka ukuya kudokotela wezilwane ngokushesha.
Endabeni yenja enempilo, kungenzeka ukuthi ulinde usuku ukuze ubone ukuthi ngabe kukhona ukungahambi kahle kwesikhashana. Kunoma ikuphi, kuhlale kudingekile ukuxhumana nodokotela wezilwane othembekile ukuze unqande noma yiziphi izinkinga futhi uvimbele izimo ezinzima kakhulu.
Inja yami ayifuni ukudla, iphuza amanzi kuphela
Lapho inja yethu ingafuni ukudla, kungaba uphawu lokuthi une-pathology ethile. Uhlu lwezifo ezingadala ukulahlekelwa ngokuphelele isifiso sokudla ezinjeni lubanzi impela, futhi ngaphakathi kwalo singathola izinkinga ezincane (ukuphazamiseka kokugaya ukudla) kanye nezifo ezimbi kakhulu (ngokwesibonelo, i-canine parvovirus).
Lapho inja yenqaba ukudla, kungavela izimo ezinjengokuthi inja ayikudli ukudla kepha iyaphila noma ayidli futhi isebenzisa amanzi kuphela, noma kunezimo lapho ingala khona kokubili ukudla namanzi.
Imvamisa, lezi zimo zivame ukuvela njengomphumela wokungakhululeki okuthile, okuvame ukwehla ngemuva kwamahora amaningi ngaphandle kwesidingo sokwenza noma yini.
Yini engenzeka enja uma ingafuni ukudla noma ukuphuza amanzi?
Uma kuyethusa ukuthi inja yethu yenqaba ukudla, inkinga ingaba nkulu uma nayo ingafuni ukusebenzisa amanzi futhi isimo sibonakala sithatha isikhathi eside.
Uma, ngaphandle kwalokhu, inja ilahlekelwe kakhulu uketshezi ngenxa yohudo nokuhlanza, ungaphelelwa amanzi emzimbeni; okuthile okukhathazeka kakhulu kulezo zinja ezinobungozi obukhulu, isibonelo imidlwane, izinja ezigulayo noma izinja ezigulayo.
Lolu hlobo lwesimo lungaba wuphawu lokuthi inja yethu iphethwe yisifo esithile esithinta uhlelo lwayo lokugaya ukudla, yize futhi ingase ibe yinkomba yezifo ezithinta izinso zayo kanye / noma nenhliziyo, futhi ngenxa yalokho, idale ukwehla okukhulu noma okuphelele inja yesifiso sokudla, nayo edala ukuhlanza nokubola.
Kufanele kukhunjulwe ngaso sonke isikhathi ukuthi inja ephelelwe amanzi emzimbeni ikhombisa ukwehla kwesifiso sokudla, ngakho-ke kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi uketshezi alugcwaliswa hhayi kuphela ngokuzithoba, kepha futhi ngemithambo; okuzobaluleka ukuletha inja yethu esikhungweni sezilwane.
Inja yami ayikwazi ukuphuza amanzi
Lapho inja yethu imvamisa iphakathi kwalabo abavame ukushiya umhlabathi ugcwele ngokuphelele ngamaconsi lapho bephuza amanzi, baze balahle namanzi amaningi kunalawo abawasebenzisayo.
Kujwayelekile ngathi ukuthi kusimangaze ukuthola ukuthi akuzona zonke izinja ezijwayele ukwenza lokhu. Kepha ngokungafani nalokho abaningi bethu abangakucabanga, lokhu akwenziwa ngoba engazi ukuphuza amanzi, kodwa kungenxa yesinye isici.
Ngokuvamile, imvamisa izinja ezinkulu ezinamathuba amaningi okuthi zishiye konke kumanzi lapho ziphuza amanzi, kuyilapho izinja zokufuya eziphakathi nezincane zivame ukubonakala ngokuba nelukuluku lokufuna ukwazi futhi cishe futhi lingenzi udlame. Kunoma ikuphi, kufanele wazi ukuthi lokhu kubangelwa kuphela into elula: ubukhulu bomlomo wenja.
Ngokunjalo, kunezinja eziningi ezivame ukungcola kakhulu ngoba azifundisi ukuphuza amanzi ngqo emthonjeni; kulokhu, kungenxa yokuthi izinja zidinga amanzi ukuba azole ukuze aphuze.
Ngakho-ke asikho isidingo sokukhathazeka lapho sibona lokho, lapho siphuza emthonjeni, inja yethu iyakhwehlela kanye / noma iminyanise kancane, ngoba ezilwaneni le ndlela yokusebenzisa amanzi iyinkimbinkimbi impela.
Kulokhu, into efaneleke kakhulu ukuthi sigcwalisa isikhwama esincane ngamanzi amancane avela emthonjeni bese siyibeka phansi ukuze inja yethu ithole ithuba lokuphuza kahle, njengokungathi umkhombe omncane.
Yini okufanele uyenze uma inja yami ingadli?
Njengoba sishilo, izizathu zokuthi kungani inja ilahlekelwa isifiso sokudla ingahlukahluka kakhulu futhi ngokuvamile ngenxa yesizathu somzimba; noma kunjalo, kubalulekile njalo ukuthi sithathe inja yethu siyiyise kudokotela wezilwane ukuze ukhiphe noma yikuphi ukukhubazeka okungathi sína futhi uthole ukuthi kungani ungafuni ukudla.
Ukuthi inja ayidli futhi ayiphuzi, inqobo nje uma kuyinto yesikhashana, akufanele ukhathazeke ngokweqile. Kepha uma lo mbuso ugcinwa ngokuhamba kwesikhathi, isilwane singabeka impilo yaso engcupheni yingakho kudingekile ukuthi sisheshe senze okuthile ukuze kungenzeki lutho kuso.
Ngalo mqondo, kufanele ukhumbule ukuthi lapho inja ingangeni iziphuzo, njengoba kwenzeka kubantu, izitho zayo zihlushwa yilokhu kushoda futhi kungadala izinkinga ezinkulu. Ngakho-ke, ngaphezu kwakho konke esikutshele khona, sicabange ukukunikeza amathiphu namakhambi okukhuthaza inja yakho ukuthi idle futhi / noma iphuze.
Mnike okuthile akuthandayo
Sonke siyazi ukuthi inja "ikhihliwe" ngokudla noma isiphuzo esithile. Ngokwesibonelo, kunezinja ezihlanya ngamaswidi; abanye izithelo, abanye inyama... Kumayelana nokunikela leyo nja okwamanje engafuni ukudla noma ukuphuza isibiliboco okunzima ukumelana nayo.
Futhi akufanele uhlukumeze, mnike nje okuncane ukuze abone ukuthi, uma emlinga, uzodla yini, ngoba izikhathi eziningi ukungabi nalutho ngokudla kungenxa nje yokuthi akazizwa efana nalokhu omnikeza kona. Ngakho-ke, leli fomu lingakunika inkomba yokuthi yini engenzeka kulo.
Futhi senzani ngesiphuzo? Yebo, cishe unamanzi, futhi uma engaphuzi, sinenkinga. Kepha kuthiwani uma umnika amanzi kwesinye isitsha? Uyaphuza lapho? Kuthiwani uma esikhundleni samanzi umnikeza ubisi (okuyinto angalubekezelela, kunjalo)? Zama ukumnika olunye uketshezi olungeyona ingozi kuye. Uyabemukela? Kwesinye isikhathi amanzi okumele bawaphuze angaba mabi, futhi bayakuqaphela, ngakho-ke bayayeka ukuphuza lapho kodwa ezikhathini eziningi bangakwenza bekwezinye izindawo.
Chitha isikhathi naye
Kwesinye isikhathi izinja zizizwa zidabukile futhi zinesizungu. Futhi lokho kuthinta indlela abadla ngayo. Kodwa-ke, uma uchitha isikhathi nabo, uma uhlanganyela nezikhathi lapho udla noma uphuza, inja yakho ingahle ibe nentshisekelo kulokho kudla noma isiphuzo futhi, nayo, uyikhuthaze ukuthi yenze kanjalo.
Vele, qiniseka ukuthi lokho okudlayo akulimazi kubo, ikakhulukazi uma isilwane sakho sinezinkinga zesisu. Zama njalo ukuthola ukudla neziphuzo ongazinikeza inja yakho ukuze ibone ukuthi nayo ingadla okufana nokwakho.
Shintsha indlela odla ngayo
Kwesinye isikhathi izinja ngeke zidle ngoba nje zingakutholi okuzinika kona okuhehayo. Ngakolunye uhlangothi, uma ushintsha indlela odla ngayo, izinto ziyashintsha. Ngalo mqondo, izinja eziningi azikubekezeleli ukudla kahle, ikakhulukazi okuphakelayo "okushibhile" okungenakho ukunambitheka noma okungenzeka kunganconyelwa kona.
Kunalokho, uma uyinika olunye uhlobo lokuphakelayo, noma ukudla, izinto ziyashintsha. Yilokho okuzofanele uzame. Ngamanye amagama, sikhuluma ngokubona ukuthi ngabe inja yakho idla yini enye ngaphambi kokuphakelayo okujwayelekile noma ukudla.
Isibonelo, ake ucabange ukuthi uhlala umnikeza ngicabanga ukuthi futhi akadli. Esikhundleni salokho, uma umenzela isidlo sokuzenzela uyasidla, noma ukudla okumanzi. Uma kunjalo, kungadingeka ukuthi uphinde ucabange uhlobo lokudla olulandelwa yinja yakho ukuze ikwazi ukondla.
Futhi kuthiwani ngamanzi? Konke kuyinkimbinkimbi lapha. Ngoba ngokuvamile izinja zinikezwa amanzi ompompi, kepha kuthiwani uma zingawathandi? Ungazama ukushintsha isitsha samanzi (Kungenzeka ukuthi yamnukisa yingakho engaphuzi), noma imnikeze namanzi asebhodleleni ukuze abone ukuthi angakubekezelela yini. Ngalo mqondo, sikhuluma "ngokulinga nephutha" ukuze kunqandwe izinkinga ezinkulu ezibandakanya ukuya kudokotela wezilwane.
Ushaye khona, iyogathi yemvelo ingakhuthaza inja yakho ukuthi idle. Eqinisweni, iyogathi, inqobo nje uma ingenazo izithasiselo, imibala ... ingazuzisa kakhulu (njengoba kwenzeka kubantu). Futhi kuyisikhuthazo sokudla.
Phakathi kokunye, i-squishy - ngeke kudingeke ukuba uzikhandle ukuyihlafuna; futhi, ngakolunye uhlangothi, futhi kuphethe uketshezi oluthile. Eqinisweni, odokotela abaningi bezilwane bavumelana nokukufaka ekudleni kwabo ngoba kuzokwenza ukuthi amathumbu abo asebenze kangcono kakhulu.
Yebo, uyifunde kahle. Kepha sikufanelekela wena. Esikufunayo ukunikeza isilwane sakho amandla futhi simenze azizwe kahle, noma ungadli noma ungaphuzi. Kungani? Yebo, ngoba kuyisengezo esingakusiza ukuthi udle, uphile kakhulu, futhi unciphise ngandlela thile inkinga onayo.
Isipuni esisodwa ngosuku sanele. Kepha njalo ukuzama ukumenza adle futhi aphuze ngokwejwayelekile. Ungathenga iCeregumil kusuka kulesi sixhumanisi.
Uma kwenzeka kungakusebenzeli lutho, kungcono ukuthi uye kudokotela wezilwane uyokwenza izivivinyo ezifanele ukuze wazi ukuthi yini engenzeka kuye nokuthi kungani lesi simo senzekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izifo » Kungani inja yami ingadli noma ingaphuzi amanzi?
Konke okwenzelwe inja yakho
Nakekela inja yakho njengoba ikunakekela ngalezi zincomo esizenzayo:
AR Moya kusho
Le ndatshana yinde kakhulu futhi ayinembile futhi ayinalo ulwazi olufanele nolusizo. Ngempela. Siyabonga nangesikhathi sakho.
Phendula ku-AR Moya
Inja yami ichama kakhulu, ngani?
Kungani inja yami izula izungeza?
Thola izindatshana zakamuva ngezinja.